Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UNkulunkulu unohlelo lweminyaka eyizi-6000,
oluhlukene izigaba ezintathu, leso naleso sibizwa ngenkathi.
INkathi Yomthetho kuqala, kube yiNkathi Yomusa, bese iNkathi Yombuso iba yisigaba sokugcina.
Noma umsebenzi kaNkulunkulu wehluka kuleyo naleyo, wonke uya ngokudingwa yisintu,
noma ukuqonda ngqo, kuya ngamacebo asetshenziswa uSathane ngenkathi elwa Naye.
Inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu ukwehlula uSathane,
ukwembula ukuhlakanipha nokuba namandla amakhulu kukaNkulunkulu, nokuveza wonke amacebo kaSathane,
ngalokho esindisa umuntu ekubuseni kwakhe, ngalokho esindisa umuntu ekubuseni kwakhe.
Ukwembula ukuhlakanipha nokuba namandla amakhulu kukaNkulunkulu,
nokuveza ububi bukaSathane obesabekayo,
ukufundisa okudaliwe ukwehlukanisa okuhle kokubi,
nokwazi ukuthi uMbusi wazo zonke izinto nguNkulunkulu uqobo,
abone ngokucacile ukuthi uSathane uyisitha somuntu, ukuthi ungomubi, uyisonakali,
ukuze umuntu ahlukanise okuhle kokubi, iqiniso emangeni,
ubungcwele ekungcoleni, nobukhulu ebuphansini.
Enze isintu esingazi sifakaze Ngaye:
Akuyena uNkulunkulu olethe ukonakala kumuntu,
futhi nguNkulunkulu uqobo kuphela, iNkosi yendalo,
onganika izinto zokuthokozelwa futhi alethele umuntu insindiso.
Lokhu ukuze bafike ekwazini ukuthi uNkulunkulu unguMbusi wazo zonke izinto,
ukuthi uSathane uyisidalwa nje Sakhe, esabuye sakhetha ukumphendukela.
Uhlelo lukaNkulunkulu lweminyaka eyizi-6000 lwehlukaniswe izigaba ezintathu,
ukuze okulandelayo kufezeke:
ukuvumela izidalwa Zakhe zibe ofakazi Bakhe,
ukuze zazi intando Yakhe, futhi zibone ukuthi iqiniso Liwuye.